OMN: Qophii Hiriira Dubartoota Addunyaa Hag. 7, 2020 ta’u irratti marii taasifame. – Kichuu
HomeAfaan OromooTVOMN: Qophii Hiriira Dubartoota Addunyaa Hag. 7, 2020 ta’u irratti marii taasifame.
(minnesotareforme)–When Amina Dedefo was going through a rough time, like during final exams at Hamline University, she would turn to the song Jirra, by the Ethiopian singer Hachalu Hundessa.